स्वर्गीय सांसद वलीको अन्त्यष्टि शनिवार गरिने « Farakkon
स्वर्गीय सांसद वलीको अन्त्यष्टि शनिवार गरिने
दाङ,फागुन, १० । ५ नं. प्रदेशका स्वर्गीय सांसद उत्तरकुमार वलीको अन्त्येष्टि शनिवार मात्रै गरिने भएको छ । सवारी दुर्घटनामा परेको १६ दिन पछि निधन शुक्रवार विहान निधन भएका सांसद ओलीकोलाई अन्त्यष्टिका लागि उनकै पुर्खेउली घर घर दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. ६ लेटार पु¥याइने भएको छ ।
अबको केही बेरमा उनको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि काठमान्डौंस्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुमबाराहीमा राखिने जानकारी दिइएको छ । विहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि त्यहाँ राखिने स्वकिय सचिव एमन शाहले जानकारी दिए । ३४ बर्षीया सांसद वलीको शवलाई त्यसपूर्व पोष्ट मार्टमको लागि पाटन हस्पिटलमा लगिएको थियो । पार्टी कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली पछि शुक्रवार दिउँसो हेलिकोप्टर मार्फत शव दाङ ल्याउने तयारी गरिएको शाहले बताए । वलीको शव तुलसीपुरको टरिगाउँ एयरपोर्ट नजिकै रहेको निजी निवासमा राखिने छ ।
त्यसपछि शनिवार विहान तुलसीपुर स्थित पूर्व नेकपा एमालेको अंचल पार्टी कार्यालयमा ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने भएको छ । त्यसपछि सांसद वलीको पूर्खेउली घर दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. ६ लेटार पु¥याइने छ । वलीको अन्तिम संस्कार श्रीगाउँको चिराघाटस्थित खोलामा गरिने जानकारी दिइएको छ ।
स्वर्गीय सांसदका दुई छोरा छन् । कान्छो छोरा ७ बर्ष र जेठो छोरा ९ बर्ष उमेरका रहेको स्वकिय सचिव एमएन शाहले जानकारी दिए ।
कांग्रेसद्वारा आन्दोलनको घोषणा, ३० गते देशभर प्रदर्शन गर्ने